Comedy – Channel Myanmar
Hindi Medium (2017) "မိဘတိုင်းက သူတို့ သားသမီးတွေကို ကိုယ်ရည်ကိုဟ်သွေး တောက်ပြောင် စေချင်တယ်။" "အထူးသဖြင့် သူတို့ထက်ပိုသာစေချင်ကြတယ်။" ***************************************** Bollywood မှာ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ မင်းသားတွေ အများကြီး ရှိတဲ့ ကြားကနေ Irrfan Khan ကလည်း နမည်ကြီး အောင်မြင်တဲ့ မင်းသား တစ်ယောက်ပါပဲ။ Bollywood တင်မက Hollywood ထိအောင်မြင်တဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်။ အထူးသဖြင့် The Lunchbox (2013) မှာလည်း ပရိတ်သတ် အကြိုက်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဆိုရင်လည်း IMDB 8/10 ထိရရှိထားပါတယ်။ #Hindi Medium ဆိုတော့ မြန်မာလိုဆိုရင် ဟန္ဒီလူလတ်တန်းစားပေါ့့ ဟုတ်ပါတယ် ကိုယ်တိုင် ပညာရေးမှာ မထူးချွန်ခဲ့တော့ ကိုယ်တွေလို သမီးလေးကို ပညာရေးမှာ မထူးချွန်မှာ စိုးရိမ်လွန်နေတဲ့ ရာဂ်ျ ဘတ်တရာ နှင့် မီတား ဘတ်တရာ တို့ဟာ သူတို့ သမီး ပညာရေး အတွက် ပေါင်းစုံကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဒေလီမြို့ရဲ့ ထိပ်တန်းကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းအပ်ခွင့်ရဖို့ နေရပ်ကနေ လူ့အထက်တန်းစားတွေကြားထဲကို ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ကြတယ်။ လူလတ်တန်းစား နဲ့ ...
IMDB: 8.0/10 1345566 votes
Going in Style (2017) Going in Style (2017)_______IMDb - 6.6/10 ဒီကားလေးကဘယျလိုကားလေးလဲဆိုတာမမေးခငျပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့သူတှကေိုပဲအရငျကွညျ့လိုကျပါ။ စိတျဝငျစားစရာဖွဈမယျဆိုတာသိသာပါတယျဗြာ။ Now You See Meဇာတျကားတှမှောအပွငျဇာတျကားတျောတျောမြားမြားမှာပါဝငျတဲ့ဝါရငျ့သရုပျဆောငျကွီးMorgan Freeman၊ အဲဒီNUSMကားထဲမှာပဲMorganနဲ့အတူပါဝငျခဲ့တဲ့Micheal Caineနှငျ့ နောကျထပျဝါရငျ့သရုပျဆောငျAlan Arkinတို့ပါဝငျပါတယျ။ အဖိုးကွီးသုံးယောကျပေါငျးလောငျးကြျောပှဲကွမျးထားကွတဲ့2017ထှကျဟာသကားကောငျးလေးဖွဈပါတယျ။ ဇာတျကွောငျးလေးကတော့အသကျအရှယျထောကျလာပွီဖွဈတဲ့ဝီလီ၊ဂြိုးနဲ့အယျဘာ့တျတို့ သူငယျခငျြးတတှငှေကွေေးအခကျအခဲတှနေဲ့ရငျဆိုငျလာရပွီးဘဏျတှရေဲ့နှိပျစကျမှုတှကေိုခံနရေပါတယျ။ အဲဒီနောကျသူတို့နှဈပေါငျးမြားစှာအလုပျလုပျပေးခဲ့တဲ့companyဟာပိုငျရှငျအသဈလကျထဲရောကျပွီးနောကျ သူတို့ခံစားနရေတဲ့ပငျစာလစာလေးတှကေိုပါဖကျြသိမျးတော့မယျလို့သိလိုကျရတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့ခဈြတဲ့မိသားစုတှအေပေါငျးအသငျးတှဒေုက်ခနဲ့လှလှနဲ့တှရေ့တော့မယျဆိုတာသဘောပေါကျလာကွပါတယျ။ အဲဒီတော့အဖိုးကွီးသုံးယောကျသားဘဏျကိုဓါးပွတိုကျဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျကွပါတော့တယျ။ အသကျအရှယျတှကွေီးနကွေပွီဆိုပမေယျ့ သုံးယောကျသားဘယျလိုအခကျြကကြသြခြောစီစဉျပွီးပှဲကွမျးကွမလဲဆိုတာကတော့စိတျဝငျစားစရာပါပဲ။ အဲတော့သူတို့သုံးယောကျဘယျလိုအခကျအခဲတှကေိုတူတူရငျဆိုငျကွမလဲ။ ဘယျလိုဖွရှေငျးကွမလဲ။ သူတို့လုပျဆောငျမယျ့အကွံအစညျတှအေောငျမွငျပါ့မလား။ ရဲတှစေုံထောကျတှကိုဘယျလိုနှဈကပျြကှကျနငျးသှားမလဲဆိုတာကိုဟာသအမွူးလေးတှနေဲ့ရှုစားရမှာဖွဈပါတယျ။ တကယျကွညျ့လို့ကောငျးပွီးစိတျအမောပွစေမေယျ့ကားကောငျးလေးဖွဈမယျဆိုတာအသအေခြာပဲဖွဈတာမို့ လကျမလှတျစဖေို့တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။ Ratingအနနေဲ့လဲ6.6 ထိရထားပွီးရုံဝငျငှဒေျေါလာ82.1သနျးထိရရှိထားတဲ့ကားလေးဖွဈပါတယျ။ ကဲအဖိုးကွီးတှလေေးတေးတေးနဲ့ဘယျလိုလကျစှမျးပွကွမလဲဆိုတာတော့ရယျရငျးမောရငျးကွညျ့လိုကျရအောငျဗြာ။ (ဘာသာပွနျ သူကတော့ May Tharaphi Twinlay ပါ) File Size : (702 MB) Quality : Webrip 720p Running Time : 1hr 36minutes Format : Mp4 Genre : Comedy,Crime Translated By May Tharaphi Twinlay Encode By Thanhtike Zaw
IMDB: 6.6/10 73,660 votes
200 Pounds Beauty ဒီနေ့လဲ IMDb Rating (6.9) ထိ ရရှိထားတဲ့ ကိုရီးယား ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားနဲ့ထပ်မံမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ဒီဇာတ်ကားက တချို့လဲကြည့်ဖူးလောက်ပြီ တချို့လဲမေ့နေလောက်ပြီ တချို့လဲသတိရဆဲဖြစ်နေမယ့် တစ်ခေတ်တစ်ခါက နာမည်ကြီးဇာတ်ကားပါ။ ကျွန်တော်တော့ အခုပြန်ကြည့်တာ ထပ်ပြီး Heart ထိအောင် ခံစားရပါတယ်။ကိုးရီးယားမှာ တအားကို ဟော့ဖြစ်ခဲ့ပြီး "ပြရက် ၂၀ နဲ့ လက်မှတ် ၄ သန်း ရောင်း ရပြီး" လို့ ဖေါ်ပြခံခဲ့ရတဲ့ဇာတ်ကားပါ။၄၂ ရက်မှာ လက်မှတ် ၅.၈၃ သန်း ရောင်းခဲ့ရပြီး၊ ကိုးရီးယား တစ်နိုင်ငံလုံး ရုံပေါင်း ၂၅၀ မှာ တပြိုင်နက်တည်းပြသခဲ့တာပါ။ စံချိန်တွေချိုးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ် US$4Million ပဲရှိခဲ့ပေမယ့် Box Office ဝင်ငွေ US$ 42 Million ပြန်ရခဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဇာတ်ကားရဲ့ ဒါရိုက်တာ Kim Yong-hwa ကို JoongAng ...
IMDB: 6.9/10 5,705 votes
All Ladies Do It (1992) ထုံးစံ အတိုင်း ဘာသာပြန်ကောင်းတဲ့ အဘဆရာ သာရစ် ကတော့ အိမ်ထောင်ရေး ရုပ်ရှင်တစ်ကားကို ၃ ကြိမ်မြောက် ထပ်မံ ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါပြီ ... :P ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ Rated R အဆင့် မို့ မိသားစု နှင့် အတူမကြည့်ရန် ၊ အသက်မပြည့်သေးသူများ မကြည့်ရန် သတိပြုမှုပါ... အိမ်ထောင်ရေး ပညာပေး ဇတ်လမ်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး မိန်းမဖြစ်သူမှာ ယောကျာင်္းဖြစ်သူထံမှ စိတ်ကျေနပ်မှု မရ၍ အပြင်တွင် တစိမ်းယောင်္ကျား တစ်ဦးဖြင့် ခြေလိမ်ရှုပ်သော ဇတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်.... Guru Alcon ============
At War For Love (2016) ဒီဇာတ်လမ်းလေးဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း waterကို အသံမထွက်တတ်ဘဲ warလို့မှားထွက်မိလို့စစ်တပ်ထဲရောက်လာတဲ့အူကြောင်ကြောင် အီတလီစစ်သားလေးတစ်ယောက်အကြောင်းပါ … ဒါပေမယ့်လည်းဖြစ်ပုံက အဲ့ဒီနေ့က သူ့ကောင်မလေးကိုလက်ထပ်ခွင့်ရဖို့အတွက် ပင်လယ်ခြားနေတဲ့စီစလီမြို့ကသူမရဲ့အဖေဆီ သွားပြီးခွင့်တောင်းရမှာပါ… ဒါပေမယ့် စားပွဲထိုးငမွဲလေးဖြစ်တဲ့အာတူရိုဟာ သွားဖို့ရာ ကားခသင်္ဘောခလေးတောင်မတတ်နိုင်တဲ့အတွက် စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ဘားသွားပါလေရော… ဘားလည်းရောက်ရော ရေတောင်းတာ Waterကိုအသံမထွက်တတ်ဘဲ warလို့ထွက်မိတဲ့အတွက် စစ်တပ်ထဲအူကြောင်ကြောင်နဲ့ရောက်သွားပါတယ်... ဒါပေမယ့်လည်း စစ်တပ်က စီစလီမြို့ကိုတပ်ကူလွှတ်လိုက်တဲ့အတွက် ရေငတ်တုန်းရေတွင်းထဲကျပြီး စီစလီမြို့ကိုဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ကြီးကိုရောက်သွားပါတော့တယ်... စီစလီမြို့အရောက်မှာတော့ သူ့ချစ်သူရဲ့ဖခင်ကိုရှာဖွေရင်း ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ…… နိုင်ငံကိုပေးဆပ်ဖို့စစ်တပ်ထဲဝင်လာတဲ့သူရဲကောင်းအရာရှိကြီးဖီးလစ်… ဗုံးစောင့်ကြည့်ပေးရတဲ့ မျက်မမြင်နဲ့ ထော့ကျိုးအတွဲ… စစ်တိုက်ထွက်သွားတဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့မိသားစုလေး… စတဲ့သူတို့ရဲ့စစ်အတွင်း ဘဝလေးတွေကိုဟာသနှောလိုက် ငိုချင်အောင်လုပ်လိုက်နဲ့ ပရိသတ်ကိုနည်းမျိုးစုံနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုပေးထားတဲ့ကားလေးပါ… သဘာဝကျကျ ခွီရတဲ့အခန်းတွေတော့ သိပ်ကိုသဘောကျရပါတယ်…… အနှစ်ချုပ်ပြောရင်တော့ တကယ်ကြည့်လို့အရမ်းကောင်းတဲ့ကားလေးတစ်ကားပါ...Quality…..BluRay 720p Duration…..01:39:00 Format…Mp4 File Size…(807 MB , 302 MB) Translator…..May Thazin Myint Encoder…..Moe Myint LwinDownload with Yoteshin Link Download with CM Cloud Download with Openload Download with Openload (Small Size)
10 Things I Hate About You (1999) 10 Things I Hate About You (1999) IMDb - 7.3/10_____Rotten - 69% ဒီတဈခေါကျ တငျဆကျပေးခငျြတဲ့ ဇာတျကားကတော့ 1999 ခုနှဈ က ထှကျ ရှိခဲ့တဲ့ "10 things I hate About U" ဆိုတဲ့ ကြောငျးသားအခဈြ ဇာတျကားဖွဈပါတယျ ဇာတျလမျးအညှနျး- ပါဒှာ ဆိုတဲ့ ကြောငျးတျောကွီးကို ကမျမရှနျ ဆိုတဲ့ ကြောငျးသားလေး တကျရောကျခဲ့ပါတယျ ကြောငျးစတကျ တဲ့ နမှေ့ာဘဲ ဘီယနျကာဆိုတဲ့ စျောခြောခြောလေးကို တှပွေီ့း ခှကျ တော့တာဘဲ ဘီယနျကာ မှာ ကတျ ဆိုတဲ့ ဂှကကြ အမ တဈယောကျရှိပါတယျ.. ကတျက လူမှုဆကျဆံရေးညံ့ပွီး ဘဲမထားဘူးတဲ့.. ဒါကို သိတဲ့ သူတို့ အဖကွေီးက အမ ရညျးစားထားမှ ညီမလဲ ရညျးစားထားရမယျ ဆိုတဲ့ စညျးကမျးခလြိုကျတော့တာဘဲ.. ကမျမရှနျ ခငျမြာ ဘီယနျကာဆိုတဲ့ အခဈြနတျသမီး လေးကို ...
IMDB: 7.3/10 287.107 votes
Our School E.T (2008) ဇာတ်လမ်းအညွှန်း =========== 2008 ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့ ပြီး IMdb 6.2 ရထားတဲ့ ကိုရီးယား ဟာသကားလေး တစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မင်းသားကြီးကတော့ ပျိုမေတွေရဲ့ အသဲစွဲ မင်းသားကြီးဖြစ်ပြီး တခြား မင်းသားမင်းသမီးတွေကလည်း ပရိတ်သတ်ကြီးနဲ့သိပ်မစိမ်းလှတာမို့ ဇာတ်ကား ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာကို ခန့်မှန်းမိကြမှာပါ ကဲလေတောင်တော်တော် ရှည်သွားပြီဗျာ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ အထက်တန်းကျောင်းမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ GYM နည်းပြလုပ်လာခဲ့တဲ့ ဆိုးဂန်း တယောက် တနေ့မှာတော့ဆရာလိုအပ်ချက်အရ သူမကျွမ်းကျင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ကိုသင်ပြပေးဖို့အတွက် အကြောင်းဖန်လာတဲ့အခါမှာတော့ ဆိုးဂန်းတယောက် ဘယ်လိုများအခက်အခဲတွေ ကျော်ဖြတ်မလဲ ဘယ်လိုအလွဲတွေနဲ့များ ကြုံရမလဲဆိုတာတွေကိုတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးက ဆက်လက် ကြည့်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ယခု ဇာတ်ကားလေးကို ဘာသာပြန် သူကတော့ မင်းပြည့်စုံဖြစ်ပြီး သူ ချစ်နေတဲ့တယောက်သောသူ မွေးနေ့အတွက် ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်ကားအညွန်းကိုတော့ ရွေစည်းခုံဘုရားမှာ သွားရောက်ဖူးမျှော်ရင်းရေးသားခဲ့တာပါ ???? ဇာတ်ကားက ၂ပိုင်းဗျနော် လင့် တွေမယ် ၁ နဲ့ ၂ ပြထားတယ်ဗျ File size…(230MB) ...
The Edge of Seventeen (2016) ဒီကားလေးကတော့ဆယ်ကျော်သက်ဟာသ/ဒရာမာကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားအစမှာတော့ကျောင်းသူဖြစ်သူNadineနဲ့သမိုင်းဆရာMr.Brunerတို့ရဲ့စကားဝိုင်းလေးနဲ့စထားပါတယ်။ NadineဟာMr.Brunerကိုသူ့ရဲ့ဘ၀အခက်အခဲတွေကိုရင်ဖွင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကနေစလို့သူ့ရဲ့ငယ်ဘ၀ကစပြီးအိမ်တွင်းရေးတွေသူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်သူKristaအကြောင်းတွေပြောပြပါတယ်။ သူရဲ့အဖေဖြစ်သူကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်အမေဖြစ်သူနဲ့အဆင်မပြေတဲ့Nadineဟာ တွယ်တာစရာဆိုလို့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်သူKristaပဲရှိပါတော့တယ်။ တရက်အစ်ကိုလုပ်တဲ့ပါတီမှာကဲရင်းနှစ်ယောက်သားပျော်ပါးမူးပြီးအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ မနက်အိပ်ရာလည်းထရောအစ်ကိုဖြစ်သူနဲ့တူတူအချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုတွေ့လိုက်ရတော့ Nadineတယောက်အတော်စိတ်ထိခိုက်သွားပါတော့တယ်။ အဲဒါနဲ့သူ့ကိုကြိတ်သဘောကျနေသူEwrinဖြစ်သူနဲ့ပဲတွဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းNadineရဲ့ရင်ဖွင့်စရာရင်းနှီးနှစ်သိမ့်ပေးသူဟာMr.Brunerပဲဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဆိုတော့Mr.Brunerတယောက်မိမိရဲ့ကျောင်းသူဖြစ်သူကိုဘယ်လိုဖြေသိမ့်ပေးနိုင်မလဲ၊ ဘယ်လိုလမ်းပြပေးနိုင်မလဲ။Nadineရဲ့အချစ်ရေးလူမှုရေးကိစ္စတွေဟာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကတော့ လူငယ်ဆန်ဆန်ဟာသအရောအနှောလေးတွေနဲ့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Nadineတယောက်ပြဿနာတွေပြေလည်သွားမလား၊ နောက်ဆုံးဘယ်လိုendingလေးနဲ့ပြီးဆုံးသွားမလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ကားလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။ လူငယ်သဘာဝDrama/Comedyကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်လူငယ်ဆန်ဆန်သဘာဝ အလျောက်ဖြစ်ပျက်ပုံတွေကိုတင်ဆက်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (ဒီဇာတ်ကားလေးကိုဘာသာပြန်ပေးထားသူကတော့ May Thazin Myint ဖြစ်ပါတယ်) File Size : (750 MB) and (300 MB) Quality : 720p Bluray Running Time : 1hr 44minutes Format : Mp4 Genre : Comedy,Drama Translated By May Thazin Myint Encode By Thanhtike Zaw
IMDB: 7.4/10 52,489 votes
Once UponaTime in Venice (2017) ဒီကားလေးကတော့၂၀၁၇ထွက်ကားလေးပါ။သိပြီးကြပြီနေမှာပါ။ မင်းသားကြီးBruce Willisရဲ့အသက်ကြီးပေးမယ့်မပျက်ဆီးတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ အခွီနဲ့အက်ရှင်ပေါင်းဆက်ထားတဲ့တကယ်ရယ်ရတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော့Tygaတောင်ပါပါသေးတယ်။စတိဗ်(Bruce Willis)ဟာဗင်းနစ်ကမ်းခြေကအလွတ်စုံထောက်တဦးပါ။ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ဆိုပလဲနံသင့်ပြီးသူ့ခွေးကိုထိရင်တော့လုံးဝသည်းမခံတဲ့သူမျိုးပါ။ ဇာတ်လမ်းကသူ့ခွေးအခိုးခံရတာကစတာပါ။ တကယ်တော့သူ့ခွေးအခိုးခံရတာလဲသူကစတာပါ။ ဒီဘဲကြီးတော်တော်ရှုပ်တယ်ဗျတကယ်ပါ။ John Wickကားထဲကလ်ိုပဲသူ့ခွေးထိဓါးကြည့်ဆိုတော့ ပွဲကြမ်းတော့တာပေါ့။ သူပွဲကြမ်းပုံကတမျိုး John Wickလိုကြမ်းတာအဟုတ်ဘူး။ အသက်လေးကလည်းထောက်လာတော့ဦးနှောက်လေးသုံးပြီးကြမ်းတာပါ။ အဲတော့Bruce Willisတယောက်စုံထောက်ပီပီဘယ်လိုအကွက်တွေရွေ့ပြီး ဘယ်လိုဟာသဖောက်မလဲ။ အဆုံးသတ်မှာသူဘယ်လိုတွေအမြတ်ထုတ်သွားသလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ကားလေးကိုဆက်ကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ။ တကယ့်မင်းသားကြီးဆိုတော့သဘာပါပါနဲ့နှုတ်ခမ်းလေးတွေပြုံးပြုံးသွားအောင်လုပ်ပြမယ့်ကားလေးပါဗျာ။ အားလပ်ရက်လေးအနားယူရင်ခွီကြပေါ့။ဂျက်ကီချန်းအကွက်တွေပါလာမယ်:3 (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ. ဘာသာပြန်သူကတော့ Thura Zarni Aung ပဲဖြစ်ပါတယ်) File Size : (700 MB) and (260 MB) Quality : 720p Bluray Running Time : 1hr 34minutes Format : Mp4 Genre : Action, Comedy, Thriller Translated By Thura Zarni Aung Encode By Thanhtike Zaw
The DUFF (2015) ဒီတစ်ခါတော့ comedy ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် ဇာတ်မြူးလေးပါ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကထွက်ထားတဲ့ The Duff ဆိုတဲ့ movie လေးပါ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ ဘီယမ်ကာဆိုတဲ့ စာကြမ်းပိုးမလေးနဲ့ အရမ်းလန်းအရမ်းဟော့တဲ့ ဂျက်စ်နဲ့ကေဆီတို့ဟာ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေပါ ဘီယမ်ကာဟာ သူ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ duff ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေခဲ့ပါတယ် ဘီယမ်ကာရဲ့ငယ်သူငယ်ချင်း ခပ်ဟော့ဟော့ဘောလုံးအသင်းခေါင်းဆောင် ဝက်စလေက သူ့ကိုပြောပြတဲ့အခါ ဘီယမ်ကာတစ်ယောက် အတော်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပြီး သူ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ duff အဖြစ်မနေနိုင်တော့ဘဲ သူကြိတ် crush နေတဲ့ကောင်လေး တိုဘီကိုဖွင့်ပြောရဲဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ် ဒါကို ဝက်စလေကကူညီပေးခဲ့ပါတယ် အဲဒီအတောတွင်း ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကြုံရတယ်ဆိုတာကို ဟာသနှောပြီးရိုက်ထားတာပါ နောက်ဆုံးမှာတော့ စာကြမ်းပိုးလေးဘီယမ်ကာတစ်ယောက် လှလာပြီးသူ့ crush ရဲ့ အချစ်ကိုတကယ်ပဲရမလားဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်ကြပါလို့ (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ.ဘာသာပြန်သူကတော့ May Tharaphi Lwin ပဲဖြစ်ပါတယ်) File Size : (750 MB) and (300 MB) Quality : 720p Bluray Running ...
IMDB: 6.5/10 58,685 votes
God of Gamblers III Back to Shanghai (1991) ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ စတီဖင်ချောင်က အဓိကဇာတ်ဆောင်အဖြစ်ပါဝင်ထားပြီး Action,Comedy,Fantasy အမျိုးအစားဇာတ်ကားပါ။စတီဖင်ချောင်ဇာတ်ကားအတိုင်း အူတက်အောင်ရယ်ရတဲ့ဇာတ်ကားပါ။ ဖဲကစားတဲ့ လူစွမ်းကောင်းတွေအကြောင်း ကြည့်ကြပါဦး။God of Gamblers ဇာတ်ကား (၃) ကားလုံးကို https://channelmyanmar.org/?s=god+of+gamblers မှာရှာပါ။ File Size…(900MB) and (430MB) Quality…BluRay Rip 720p Format…mp4 Duration…01:56:00 Subtitle…Myanmar Subtitle(Hardsub) Encoder…Nyeinsaeya Aung Translated by Missy Win
God of Gamblers II (1991) ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ စတီဖင်ချောင်က လောင်းကစားလူစွမ်းကောင်းအဖြစ် စတင်ပါဝင်လာတာမို့ ဟာသတွေအတော်များများပါပါတယ်။Andy Lau က လောင်းကစားသူရဲကောင်းအဖြစ်ပါဝင်ထားပြီး Action,Comedy အမျိုးအစားဇာတ်ကားပါ။God of Gamblers ဇာတ်ကား (၃) ကားလုံးကို https://channelmyanmar.org/?s=god+of+gamblers မှာရှာပါ။ File Size…(900MB) and (400MB) Quality…BluRay Rip 720p Format…mp4 Duration…01:39:00 Subtitle…Myanmar Subtitle(Hardsub) Encoder…Nyeinsaeya Aung Translated by Missy Win
IMDB: 6.9/10 1,921 votes
IMDB: 7.4/10 3,592 votes
The Right Kind of Wrong Leo the dishwasher falls in love withabride on the day of her wedding - to another man.အပန်းဖြေကြည့်ဖို့အတွက် The Right Kind of Wrong ဆိုတဲ့ Romance Comedy လေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒ်ီကားလေးဟာဆိုရင် လီယိုပါလာမီနိုဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတာပါ။သူဟာဆိုရင် စိတ်ကူးအကြီးကြီးယဉ်လေ့ရှိပြီး မဖြစ်နိုင်တာတွေကိုတောင့်တတက်တဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။ဘေးက်နေအကြံပြုဝေဖန်တာတွေကို ဂရုမစိုက်သလို လုံးဝနားထောင်လေ့မရှိပါဘူး။သူ့အိပ်မက်က စာရေးဆရာတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပေမဲ့ နာမည်ကျော်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ကျမှ ဖြန့်ချီမယ်ဆိုပြီး ရည်မှန်းသူပါ။အလိုက်လဲမသိတက် မိန်းမကိုလည်း ကြင်နာရကောင်းမှန်းမသိတဲ့ သူဟာ မိန်းမနဲ့လည်းအဆင်မပြေဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကိုသူ့မိန်းမက Why You Suck ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ဘလော့တစ်ခုထောင်ပြီး သူ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုရေးသားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ သူတို့ကွဲကျတဲ့ အချိန်မှာသူက ပန်ကန်းဆေး သမားဘ၀ရောက် သူ့မိန်းမကတော့ Why You Suck ဘလော့နဲ့နာမည် ကြီးသွားပါတော့တယ်။သူလဲ ...
IMDB: 6.1/10 8,364 votes
Smurfs: The Lost Village (2017) In this fully animated, all-new take on the Smurfs,amysterious map sets Smurfette and her friends Brainy, Clumsy and Hefty on an exciting race through the Forbidden Forest leading to the discovery of the biggest secret in Smurf history.ပါပါစမက်ဖ်အုပ်ချုပ်တဲ့ စ မက်ဖ်ရွာလေးမှာ စမက်ဖက်တီ၊ ဘရိန်နီ၊ ကလမ်ဆီနဲ့ ဟက်ဖ်တီ တို့က အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ ပါ။တစ်ရက်မှာတော့ စမက်ဖက် တီဟာ မြေပုံထဲမှာ တားမြစ်ကန့် သတ်ထားတဲ့ တောကြီးနဲ့ပတ် သက်ပြီး ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာ ကြောင့်ပါပါစမက်ဖ်နဲ့ ...
IMDB: 5.9/10 5,763 votes
Tanu Weds Manu Returns (2015) The film isasequel to Tanu Weds Manu (2011), in which stars Kangana Ranaut (Tanu) and R. Madhavan (Manu) reprise their roles from the original. Tanu and Manu's marriage collapses. What happens when Manu meets Tanu's lookalike Kusum - and when Tanu returns? Kangana Ranaut also portrays the additional role ofaHaryanvi athlete Kusum in the film.Tanuနဲ့ Manu ...
IMDB: 7.7/10 20,212 votes